हिन्दु धर्म ग्रन्थमा यौनः अविवाहित स्त्रीले यौनको इच्छा देखाएमा सम्बन्ध राख्नु धर्म !
Posted: 2018-10-13 06:47:03
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सभ्यताको विकासका साथ साथै सेक्सका सम्वन्धमा सामाजिक रीति विकास भयो र नैतिक मानदण्ड स्थापित भयो । यसलाई हामी ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय सन्दर्भमा बुझन सक्छौँ । जतिसुकै आधुनिक भएपनि हिन्दु बाहुल्य रहेका पुराण र बेदका चर्चा हुने नेपाल र भारत जस्ता देशमा यौनको विषय वर्जित नै छ । अझै पनि मानिसहरु यौनको विषयमा खुलेर कुरा गर्न सक्दैनन् । यौनका कुरा गर्दा लोकको लाज मान्नु पर्छ भन्ने हाम्रो समाजको प्रचलन छ ।...
Posted: 2018-10-11 15:28:06
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - काठमाडौको कर्मा लञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा उतकृस्ट १३ पतिस्पर्धि सङै टिजर सार्बजनिक गरिएको हो । एक विशेष कार्यक्रम बिच सार्बजनिक गरिएको टिजर लन्च कार्यक्रम उत्कृस्ट रहेको इभेन्ट हेड मेघ ...
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- चर्चित र विवादित नायिका नम्रता श्रेष्ठमाथि उपन्यास लेखिँदैछ । यस उपन्यासमा ब्लु भिडियो प्रकरणपछि उनले समाजमा पुनर्स्थापित हुन गरेको ‘संघर्ष’ लाई फोकस गरिने लेखक सविन प्रियासनले बताएका छन् । त्यसो त प्रियासनले यो उपन्यासमा काम सुरु गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नम्रताको विषयमा लामो अनुसन्धान गरेर उपन्यास लेख्न थालेको बताउँछन् उनी ।...
कति लामो हुनु पर्दछ यौन सम्पर्कको अवघि ? यस्ता छन् धेरै महिला पुरुषले भोग्ने तीन यौन समस्या र समाधान
Posted: 2018-10-06 07:13:36
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौ- सेक्स अवधि यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । तर, धेरै मानिस अहिले पनि शीघ्र पतन तथा ढिला पतनको विषयमा सोचेर यत्तिकै हैरान भइरहेका हुन्छन् । साथीहरूको बीचमा कुरा हुँदा ‘मेरो त यार कहिलेकाहीँ एक घण्टासम्म पनि जान्छ’ भन्दै गफ चुट्ने अनि पोर्न फिल्ममा देखाइएको जस्तै लामो समयसम्म यौन सम्पर्क गर्न खोज्नेहरू थुप्रै छन् ।...